Fitaterana an’habakabaka : Hiverina manomboka ny alahady izao ny zotra mankany Maroantsetra -
AccueilRaharaham-pirenenaFitaterana an’habakabaka : Hiverina manomboka ny alahady izao ny zotra mankany Maroantsetra
Vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny seranam-piaramanidina ao Saint-Pierre- Pierrefont sy ny Aéroport de Madagascar (Adema). Feno ny fenitra amin’ny ahafahan’ny seranam-piaramanidin’i Maroantsetra mandray fiaramanidina. Hiverina indray manomboka ny alahady ho avy izao araka izany ny fitaterana an’habakabaka mankany Maroantsetra. Antony nanakatonan’ny fanjakana sy ny kaompania mpitatitra Air Madagascar ny seranam-piaramanidina ao amin’io distrika io, ny tsy fisian’ny fiara mpamonjy voina (pompier) tany an-toerana. Fepetra izay tafiditra amin’ny fenitra fiarovana ny sidina sy ireo fiaramanidina tonga any an-toerana. Nivaha ny olana ankehitriny, satria nahazo fiara mpamonjy voina avy amin’ny seranam-piaramanidina any Saint-Pierre ity seranana ity. Omaly hariva no niainga tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina tamin’ny alalan’ilay sambo « Prestige III » io fiara io ary andrasana anio tolakandro ny fahatongavany ao Maroantsetra. « Hiasa avy hatrany eny anivon’ny seranam-piaramanidina ao Maroantsetra io fiara io ary rahampitso dia efa hisy ny sidina hihazo an’i Maroantsetra, ary tsy ho tapaka intsony toa ny teo aloha izany », araka ny fanamarihan’ny lehiben’ny Faritra Analanjirofo, Ramaroson Jacques izay nanao ny ezaka nahazoana io fiara io, niaraka tamin’ny Talem-paritry ny fitaterana ao Toamasina, Narove Mamy. « Azon’ny kaominina ao Maroantsetra ampiasaina ihany koa io fiara io raha sendra misy ny hain-trano raha tsy misy ny sidina », hoy ihany izy. Hanala fasahiranana amin’ny fahafahan’ny mponina mivezivezy ny fisokafan’ny seranam-piaramanidina indray. Hatreto mantsy dia mbola olana ho an’ireo olon-tsotra, na mpandraharaha, na mpizahatany hihazo an’i Maroantsetra ny olana eo amin’ny sambo sy ny haratsian’ny lalana.
Etsy ankilan’izay, nanamarika ny lehiben’ny faritra fa mila fanarenana maika ihany koa ny seranam-piaramanidina ao Mananara avaratra izay tsy misy afa-tsy fiamanidina kely sisa no afaka mipetraka ao.
Misedra olana eo amin’ny famatsiana solika ihany koa amin’izao fotoana ny any Sainte-Marie sy Mananara avaratra ary Maroantsetra, noho ny fiatoana, noho ny fanamboarana, ny sambo « Managnara », izay miantsoroka ny fitaterana solika any amin’ireo distrika ireo. Miakatra avo roa heny noho izany ny vidin’ny solika any an-toerana noho ny fisian’ireo « mpanao afera » …